Fitantanam-pitondrana13 Oktobra 2016
Etazonia11 Oktobra 2016
Fitantanam-pitondrana09 Oktobra 2016
Ny 7 Oktobra, tsaroan'ireo Rosiana i Anna Politkovskaya, iray amin'ireo mpanao gazety sangany amin'ny resaka fanadihadiana, maty nisy nitifitra tao anaty fanakadrihan'ny tranony, folo taona lasa izay.
Rosiana Mpanao Politika Maniry Hanenjika Mpanao Gazety Namoaka Lahatsary Ahitàna Azy Manao Dihin'i Ricky Martin
Mediam-bahoaka08 Oktobra 2016
Nametraka fitoriana tany amin'ny polisy ny lehilahy iray mpanolontsain'ny tanàna ao Orlov, nitoriany mpanao gazety nizara ny lahatsary ahitàna azy manao ny dihin'i Ricky Martin “Livin la Vida Loca,”
Azerbaijan07 Oktobra 2016
"Mbola tsy Oktobra izao kanefa ho avy izany". Izany no teny fanevan'ny "September", tranonkala vaovao iray izay mikendry ho sehatra hamoahana ny fomba fijerin'ny elatra havia manerana ny Firaisana Sovietika teo aloha.
Mediam-bahoaka06 Oktobra 2016
Ady & Fifandirana02 Oktobra 2016
Nampiasa ny vazivazy fanao nalefa tao amin'ny Youtube ny tambajotra fahitalavitra tao Rosia ary nandefa izany ho toy ny lahatsarin'ny fihenjanana ara-poko tena izy ao Okraina.
Hafanàm-po nomerika02 Oktobra 2016
Hanome 30 tapitrisa robla be izao ho fanohanana ireo start-up momba ny fanaovan-gazety fanadihadiana ny tetikasan'i Mikhail Khodorkovsky "Open Media".
Fifidianana01 Oktobra 2016